Boggag Internet oo Dhaqan Xumo Looga Xidhay Ethiopia – Rasaasa News
Dec 14, 2011 Boggag Internet oo Dhaqan Xumo Looga Xidhay Ethiopia
Addis Ababa, December 14, 2011 [ras] – Ciwaanka Internetka [IP] Ethiopia, ayaa laga xidhay boggag Intenet oo dhawra ah, kuwaas oo mudo badan baahinayey arimo dhaqan xumo iyo fool xumooyin lid ku ah anshaxa isticmaalka Internetka iyo dhaqanka suuban ee dadweynaha Ethiopia, sida la sheegay.
Boggagan oo hore looga fiirsan jira Ethiopia, ayaa hore u galay khaladaad, waxaana marar badan la siiyey digniin ku saabsan dhawrista anshaxa internetka. Nasiib daro waxay iska indho tireen digniinmaha ay siisay waaxda Internetka ee wasaarada Isgaadhsiinta Ethiopia, ugu dambayntiina waa laxidhay.
Sida lagu qoray bogga internetka ee dawlada, waxaa ka mida boggagan la xidhay radiojijiga iyo kilil5 oo labaduba ku sifoobay dhaqan xumo lid ku dadweynaha reer Ethiopia guud ahaan, gaar ahaana dhaqanka suuban ee Somalida.
Waxay hore dawladu u xidhay boggag internet-da oo mucaarad ku dhex fidin jiray dalka gudihiisa iyo dibadiisaba, kuwaas oo ay dawladu u aragtay in ay lid ku yihiin wax qabadka xukuumada.
Bogga Internet-ka kilil5, ayaa dhawaan qoray in si khalad ah looga xidhay bogga, ka dibna ay la xidhiidheen dawlada dhexe ee Ethiopia, taas oo siisay cudur daar ah in si khaldan loo xidhay. Bogga ayaa ugu bishaareeyey macaamiisha in hada wixii ka dambeeya ay daawan doonaan arimaha ay baahiyaan.
La taliyaha waaxda internet-ka ee dawlada degaanka Somalida Ethiopia, ayaa laga soo xigtay in ay jiraan boggag kale oo mucaaradka la safan walina ka shaqeeya Ethiopia sida bogga wardheernews.
Dispatches From Ethiopia: After the Rain in Gode